Chii chinonzi Google Colab kana Google Colaboratory - Ikkaro
kudzidziswa >> Machine Learning >> Google Kubatana kana Google Colab
Kubatana, inonziwo google colab Icho chigadzirwa cheGoogle Ongororo uye chinoshandiswa kunyora nekumhanyisa Python uye mimwe mitauro kubva kubhurawuza redu.
Colab inogamuchirwa Jupyter, yakaiswa uye yakagadzirirwa, kuitira kuti isu tirege kuita chero chinhu pakombuta yedu asi kungoshanda kubva kubhurawuza, pane zviwanikwa zviri mugore.
Inoshanda chaizvo zvakafanana neJupyter, iwe unoona chinyorwa chedu. Iwo maNotibhuku kana mabhuku ezvinyorwa zvinovakirwa pamasero anogona kuve zvinyorwa, mifananidzo kana kodhi, mune ino nhanho yePython, nekuti kusiyana naJupyter Colab parizvino chete iyo Python kernel inogona kushandiswa, ivo vanotaura nezvekushandisa gare gare vamwe vakaita saR, Scala, nezvimwe. , asi hapana musi wakataurwa.
Iyo inzira inokurumidza kwazvo yekuyedza kodhi pasina kumisikidza michina yedu uye kupinda munyika ye Machine Learning, Kudzidza Kwakadzika, ungwaru hwekugadzira uye sainzi yedata. Zvakare zvakakodzerana nevadzidzisi nekuti kubva paJupyter tinogona kugovana mapurojekiti nevamwe vanhu sekunge tiri kushandisa iyo Jupyter Hub.
Tinogona kushandisa chero python mashandiro, tinogona kushandisa TensorFlow, Keras, Numpy, ngatiendei maraibhurari avo ese.
Inotipa yemahara GPU uye TPU sevhisi,
Ivo chikamu cheboka rekuvandudza re https://colaboratory.jupyter.org/welcome/
Basa racho nderemahara asi isu tinoda account yeGmail. Notebook data rakachengetwa muGoogle Drive yedu. Uye isu tinogona kusevha uye kurodha mabhuku emabhuku kubva kuGithub futi. Pamusoro pekupinza mapurojekiti anouya kubva kuJupyter kana kuatumirawo kunze. Inoshanda ne .ipynb mafaera
Zviri pachena kuti Hardware zviwanikwa zvine mashoma. Iwe haugone kugadzira mapurojekiti anoda huwandu hwakawanda hwekuverenga. Kana iwe uchida ino sisitimu uye uchida kuishandisa kune epamberi mapurojekiti, iwe unogona kugara uchibhadhara iyo Pro kana Pro + vhezheni. Ndiri kuzotarisa pane yakasununguka.
Muzuva rake ndakatotaura nezve imwe nzira yekushandisa Jupyter kubva
Google's Machine Kudzidza Crash Course yakavakirwa paColab uye ndiri kupedzisa. Munguva pfupi ini ndichakuudza kuti sei
Kana iwe uchifarira Machine Kudzidza, ona ndeapi makosi anogona kuitwa
Nei uchishandisa Colab? Kubatsira
Nekuti iri inokurumidza uye yakapusa nzira yekumisikidza makosi uye ruzivo nezve kuronga muPython uye kuigovana nevamwe vanhu kana nevadzidzi kana iwe uri mudzidzisi.
Muchiitiko changu ndine dambudziko rekuenderana pakati peTensorFlow neCPU yangu, saka parizvino ndichaishandisa kuita mienzaniso uye bvunzo dzakasiyana neTensorFlow neKeras.
Zvakanaka, isu tinogona chete kushandisa Pyhton
Uye kuti tinoshandisa zvekare chimwe chigadzirwa cheGoogle uye isu tinoramba tichipa chikafu uye tichivimba zvakanyanya pahunyanzvi hweruzivo "Usave Akaipa"
Musiyano uripo pakati peColab naJupyter
Colab ibasa rakaitirwa, rakabatwa Jupyter, nepo Jupyter iri kurishandisa papc yako
Colab, kunyange iri yemahara kana iwe uchida komputa simba iwe unofanirwa kuenda kune yakabhadharwa vhezheni
Kugamuchirwa, iwe unogona kugovera mabhuku ekunyorera nevanhu
Jupyter Notebook. Iyo Jupyter chirongwa
Machine Kudzidza Crash Course
Maitiro ekumhanyisa .py mafaera
Chii chinonzi F-Droid
Categories Machine Learning Kubatikiti kufamba
Maitiro ekunyora bhuku rangu raibhurari
2 Nei uchishandisa Colab? Kubatsira
4 Musiyano uripo pakati peColab naJupyter